mairie-antananarivo – Fampahafantarana ny anjara andraikitry ny BMH (Bureau Municipal d’Hygiène)
Fampahafantarana ny anjara andraikitry ny BMH (Bureau Municipal d’Hygiène)
auteur 16 jona 2015 Commentaires fermés
Ny antokon-draharahan’ny fahasalamam-bahoaka na ny BMH dia manana sampan-draharaha telo(3) izay ahitana ny : Service eau hygiène; assainissement ; sampan-draharaha BMH;Service médicaux sanitaires
Ny Service Hygiène dia miandraikitra ny fanentanana ny mponina amin’ny fanajana ny fahadiovana ary ny fitandrona ny Code Municipal d’Hygiène, indrindra ny fahadiovan’ny trano fonenana, ny toeram-pivoahana, ny toerana ifamezivezen’ny daholobe,…
Ity sampan-draharaha ity ihany koa dia manana Inspecteur d’Hygiène izay manatanteraka ny fitsirihana ireo trano fivarotana sakafo masaka, ny mpivaro-kena
Ny Service médicaux sanitaires kosa indray dia miandraikitra ny fitsaboana ny olona toy ny areti-nify, ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza.
Manana ivon-toerana miisa efatra (4) ity service ity : ny BMH Isotry, ny CSB II Volosarika, ny CSB II Andravoahangy, ny CSB II Namontana,ka ireo rehetra ireo dia samy azon’ny daholobe hanatonana avokoa. Ity sampan-draharaha ity ihany koa dia mikarakara momba ny maty toy ny taratasy ahafahana manatanteraka fandevenana. Tsy izay ihany anefa fa izy ireo ihany koa no miandraikitra ny fandraharahana fanafody ho fiadiana amin’ny aretina maro samihafa.
Ny Service Eau Hygiène Communautaire dia miandraikitra ny rano sy ny fidiovana izany hoe manome fahafaham-po ny olona amin’ny fanomezana rano fisotro madio amin’ny fanamboarana fotodrafitr’asa: ny bassin lavoir, ny paompin-drano,…ary manentana ny olona mba hisotro rano madio, hanasa tanana amin’ny rano sy ny savony, indrindra fa ny fampiasana trano fivoahana madio.
Ity sampandraharaha ity ihany koa dia manara-maso ny fananam-bahoaka miaraka amin’ny RF2 (Rafitra Fikojana sy Fanadiovana) amin’ny fizaràna rano eny amin’ny Fokontany.
Ny BMH dia manatanteraka hetsika amin’ny Alakamisy 18 jona 2015 manomboka amin’ny 8 ora maraina eny Soavimasoandro. Mandritra izany hetsika rehetra izany dia hisy ny fanadiovana faobe iarahana amin’ny mponina sy ny RF2, ary hisy fandraharahana fanafody, ny fitsirihana ny toeram-ponenana, ny toeram-pivoahana, toeram-pivarotan- kena,…
Hisy ihany koa ny fitokanana pompy, fanatanterahana didim-poitra faobe, fanalana nify, fitiliana VIH Sida, ireo rehetra ireo dia maimaim-poana avokoa.
Ny antokon-draharahan’ny fahasalamam-bahoaka na ny BMH dia manentana mandrakariva ny vahoaka amin’ny fitandroana ny fahadiovana ka manafatra hoe:”Andao hifanome tanana amin’ny asa fanadiovana maharitra”.